Caalamka, 01 October 2017
Spain: Catalonia Kama Jiri Doonto Afti.
Erdogan Iyo Putin oo Heshiis Ka Gaaray Colaada Suuriya
Madaxweynaha Ruushka Vladimir Putin iyo dhiggiisa Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa Khamiistii ku heshiiyay in la riixo abuuritaanka aag ka caagan xasaradaha oo laga hirgelinayo gobolka muhiimka ah ee Idlib ee waqooyiga Suuriya.
Masjid ku yaalla Sweden oo la gubay
Masjid ku yaalla magaalada Orebro ee dalka Sweden ayaa la gubay, iyada oo wax khasaare nafeed ah aan ilaa hadda la soo sheegin.
Saddex qof oo lagu dilay weerar ka dhacay Daanta Galbeed
Qof Falastiini ah oo weerar soo qaaday ayaa maanta xabado ku furay halka la galo deegaan Yahuuda ay ka sameysteen duleedka magaalda Jerusalem, halkaasi oo uu ku dilay saddex nin oo Yahuud ah, islamarkaana si darran ugu dhaawacay qof afaraad, sida ay sheegeen booliiska iyo kooxaha caafimaadka Israel.
Markel oo Mar Kale Guuleysatay
Hogaamiyaha dalka Jarmalka Angela Merkel ayaa marki afraad loo doortay xafiiska, kadib marki xisbigeeda Christian Democrats uu ku guuleystay doorashadi federaaliga aheyd ee Axadi shalay ka dhacday dalkaasi.
Dhulgariir ka Dhacay Kuuriyada Woqooyi
Dhulgariir kooban ayaa ka dhacay dalka Kuuriyada Woqooyi, meel u dhow goob lagu tijaabiyo hubka Nukliyeerka, waxaana loo malaynayaa in arrintani ay tahay mid si dabiici ah isaga dhacday ee aanay la xidhiidhin tijaabo dhinaca hubka Nukliyeerka ah, sida ay sheegeen dalalka la deriska ah.
Shiinaha oo Xaddidaya Batroolkii uu u Dhoofin Jirey K.Waqooyi
Shiinaha, ayaa sheegtay Sabtida maanta inay xaddidi doonto batroolka ay u dhoofiso Kuuriyada Waqooyi, si ay ugu hoggaansanto cuna qabateyntii golaha ammaanka ee QM ay ku soo rogeen Kuuriyada Waqooyi.
Mexico: Millatariga Ayaa Ku Biiray Gurmadka Dhulgariirka